भागरथी भट्ट हत्या प्रकरणका दोषीलाई छिट्टै सार्वजनिक गर्छौं : डिआईजी सुवेदी (अन्तर्वार्ता) - Enepalese.com
भागरथी भट्ट हत्या प्रकरणका दोषीलाई छिट्टै सार्वजनिक गर्छौं : डिआईजी सुवेदी (अन्तर्वार्ता)
इनेप्लिज २०७७ माघ २६ गते २३:११ मा प्रकाशित
काठमाडौं, २६ माघ । सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रहरी प्रमुख डिआईजी उत्तमकुमार सुवेदीले बैतडीको दोगडाकेदार गाउँपालिका-७ कि १७ वर्षकी भागरथी भट्टको बलात्कारपछि हत्या प्रकरणका दोषीलाई चाँडोभन्दा चाँडो पक्राउ गर्ने र कारबाही गरिने विश्वास दिलाएका छन्।आज (सोमबार) विहान नेपाली रेडियो नेटवर्कबाट प्रशारण भएको ‘नेपाली बहस’ कार्यक्रममा पत्रकार ऋषि धमलासँग कुरा गर्दै डिआईजी सुवेदीले यो घट्नामा नेपाल प्रहरी सफल हुने र छिट्टै दोषीलाई सार्वजनिक गर्ने प्रतिबद्धता जनाए।उनले आफूहरुले अहिले घट्नाबारे गम्भीर अनुशन्धान गरिराखेको पनि जानकारी दिए । प्रस्तुत छ पत्रकार धमलाले सुवेदीसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :
भागरथी भट्टको हत्या प्रकरण कहाँ पुग्यो ? बलात्कारपछि हत्या गरिएको कुरा बाहिर आएको छ, वास्तविकता के हो ? बताउनुहोस् ?
हामी अनुसन्धानकै प्रक्रियामा छौं।र, म आफूपनि घट्नास्थलकै आसपासमा बसेर टिमसहित अनुसन्धान गरिराखेको छु।विगतमा अनुसन्धानको क्षेत्रमा लामो अनुभव भएका जवानहरुको संलग्नतामा हामीहरुले अनुसन्धान गरिराखेका छौं।र, त्यसमा हामीलाई स्थानियवासी र जनप्रतिनिधिहरुले पनि साथ दिइरहनुभएको छ।अनुसन्धानका सबै पाटाहरु,जुन हामीले गर्नुपर्ने हो ती सबै हामीले गरिराखेका छौं।र,यसमा देखिएका प्रगतिहरु हामी चाँडैनै सार्वजनिक गर्छौं।
अनुसन्धान कहाँ पुग्यो त ? तपाईँहरु यो घट्नाको दोषी अथवा अपराधीलाई पक्रन कहिले सफल हुनुहुन्छ ? ठ्याक्कै भन्नुहोस त ?
यो मितिमा, यो गतेमा समातिन्छ भनेर अनुसन्धानमा ठ्याक्कै भन्न सकिने कुरो होईन । हामीले गर्नुपर्ने सबै पोस्टमार्टमको प्रक्रिया पनि चलिरहेका छन् । अन्य गर्नुपर्ने सबै कुरा भइरहेका छन् । कानूनी अनुसन्धान गर्नुपर्ने कुराहरु हामीले गरिरहेका छौं । यिनी गरिरहेका कुराभित्र के भइरहेको छ भन्ने कुरा सार्वजनिक गर्ने कुरा होइन । हामी तथ्यहरू सबै पुष्टी भइसकेपछि हामी सार्वजनिक गर्छौं ।
भोलि त तपाईँहरुले सार्वजनिक गर्नुहोला, तर अहिले अनुसन्धानले के देखाउँछ ?
अहिले हजुरलाई निवेदन गर्दा यो अत्यन्तै दुःखद् घट्ना घटेको छ । एक जनाको दुःखद् घटना घटेको छ । यहाँबाट हामीले अनुसन्धान प्रक्रिया सुरु गरेका छौं । चाँडैनै यसको सबै कुरा सार्वजनिक गर्छौं ।
पोष्टमार्टम रिपोर्टमा के आयो ? तपाईँले अध्ययन गर्नुभयो होला नि ?
त्यो रिपोर्ट आउने क्रममा छ । सायद, आज आउला ।
पोष्टमार्टमको रिपोर्ट त हिजो नै आईसकेको भन्ने कुरा छ नि ?
हिजो आयो होला, तर प्रहरीले पाएको छैन् ।
उसो भए नेपाल प्रहरीले अहिलेसम्म पाएको छैन् ?
छैन् । छैन् । डाक्टर साहेवले निकाल्नु भएको छैन् ।
पोष्टमार्टम रिपोर्ट आएलगत्तै बलात्कारपछि हत्या भएको भनिएको छ, तपाईँले के पाउनुभयो त सूचना ?
अरुतिर के–के आयो बाहिर भन्ने कुराको त मलाई त्यति जानकारी भएन । तर, हाम्रो अनुसन्धा प्रक्रिया र हाम्रो टिमसँग खटिनुभएको डाक्टर साहेवहरुबाट बाहिर आएको छैन् । सायद आजसम्म दिनुहुन्छ होला ।
अपराधीलाई पक्रनको लागि यहाँहरूले कुन प्रविधि अपनाइरहनु भएको छ ?
बाहिर के–के आयो भन्ने कुराको म जिम्मेवारी दिन्नँ । हामीले बाहिर भनेका पनि छैनौं । र, केही पनि गरेका छैनौं । ती कुरा के हुन् ? छुटै अनुसन्धान होला । तर, हाम्रो अनुसन्धान प्रक्रिया द्रुत गतिमा गएको छ । अनुसन्धानमा अपनाउनुपर्ने सम्पूर्ण प्रक्रियाहरू अपनएर अगाडि बढिराखेका छौं ।
कञ्चनपुरकी निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भयो, अहिलेसम्म राज्यले अपराधीलाई कारबाही गर्न सकेको छैन् । निर्मलाको जस्तै यो घटना पनि दोहोरिने हो कि ? भनेर अहिले चिन्ता व्यक्त भैरहेको छ, तपाईहरु यो घट्नाका अपराधीलाई पक्रन सक्छौं भन्न सक्नुहुन्छ ?
हामी स्पष्टसंग भन्न सक्छौं । एउटा घट्नामा सफल सकेन भनेर यो घट्नामा पनि हुँदैन् भन्ने मिल्दैन् । हामीले सफलतापूर्वक अनुसन्धान गरेका छौं । ९७ प्रतिशत बलात्कारका घट्ना हामीले सफलतापूर्वक अनुसन्धान भएको छ नि । यसलाई पनि हेर्नुपर्यो नि त । खाली एउटा घट्नामा सकेन भने योपनि सक्दैन भनेर बाएस हुनुहुँदैन् । यो केश चाँडै हामी अनुसन्धान गर्छौ ।
मृत्तकको परिवारको चिन्ता र चासो छ नि त ? फेरी निर्मला पन्तको जस्तै हुने हो कि भनेर ? यसपटक तपाईँहरु दोषीलाई कारबाही वा कानूनी दायरामा ल्याउन चुक्नुहुन्न ? नि ?
हामी परिवारसंगै बसेका छौं । उहाँलाई हामीले विश्वास दिलाएका छौं । सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइलाई पनि हामी विश्वास दिलाउँछौं कि– हामी चाँडोभन्दा चाँडो यो घट्नाका दोषीलाई बाहिर सार्वजनिक गर्छौं ।
त्यसो भए यो केशमा नेपाल प्रहरी सफल हुन्छ ?
यो घट्नामा संलग्न अपराधी नेपालमा छैन, भारत गइसकेको छ अरे नि त ? तपाईँहरुको निश्कर्ष पनि त्यही हो ?
यो कुराले कुनै माने राख्दैन् । जहाँ भएपनि हामी ल्याएर आउछौं ।
भागरथी भट्टले न्याय पाउनुपर्छ, र अपराधीलाई कारवाही हुनुपर्छ, यसमा तपाईँहरुलाई सफलता मिलोस भन्न चाहन्छु ।
हामीलाई दबाब त छँदैछ, तर दबाब संगै जिम्मेवारी बोध गर्दै यस घट्नाका दोषी लाई छिट्टै सार्वजनिक गर्छौं । र, कडाभन्दा कडा कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता जनाउन चाहन्छु ।